दोस्रो कार्यकालका लागि प्रचण्ड फकाउँदै विद्यादेवी, ओली फकाउँदै नन्दबहादुर
७ माघ, काठमाण्डौ । संघीय संसदले पूर्णता पाएपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुन्छ । संविधानतः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको कार्यावधि
काठमाडौं ७ माघ । प्रदेशसभा सदस्यहरुको शपथ आज हुँदै छ । सातै प्रदेशसभामा निर्वाचित सदस्यहरुले सम्बन्धित प्रदेशको अस्थायी सदरमुकाममा पद तथा गोपनियताको शपथ हुनेछ । संविधान र प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनअनुसार
देउवाको सक्रियता बढ्यो, राष्ट्रियसभा निर्वाचनबारे राजपा र फोरमसँग छलफल
काठमाडौँ, ६ माघ । आगामी राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा सहकार्य गर्नेबारे प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले दलीय छलफल शुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज वाम गठबन्धनबाहेकका संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय
ओली–प्रचण्डवीच वान–टु–वान भेटवार्ता सम्पन्न, प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय सभामा कुरा मिल्यो
काठमाडौं, ६ माघ । वाम गठबन्धनका प्रमुख नेताद्धय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच बसेको निर्णायक छलफल भर्खरै सम्पन्न भएको छ । एमाले
‘प्रधानमन्त्रीमा ९९ प्रतिशत ओलीको संभावना, अध्यक्षमा सल्लाह गर्न बाँकी छ’ : झलनाथ खनाल (भिडियोसहित)
“पार्टी एकताबारे एक हप्ताभित्रै नीति र नेतृत्वमा सहमति हुन्छ “ काठमाडौं, ६ माघ । नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले एमाले र माओवादी केन्द्रवीच एकताको लागि एक हप्ताभित्रै
वीरगन्ज राजधानी बनाउनुपर्छ भनेर मैले कहिल्यै बोलेको छैन : महतो
काठमाडौं, ६ माघ । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोले आफूले कहिल्यैपनि २ नम्बर प्रदेशको राजधानी हुनुपर्छ भनेर नबोलेको स्पष्ट पारेका छन् । पत्रकार ऋषि धमलासँग नेपाली
केन्द्रिय समितिको बैठक बिट मार्दै देउवाले भने,‘के मलाई भित्तैमा पुर्याउन खोजेको हो त ? धेरै भाषणवाजी नगर्नुहोस्
काठमाडौं, ६ माघ । नेपाली काँग्रेसको दुई दिनसम्म बसेको वैठक ३ बुँदे निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको छ।राष्ट्रिय सभाको चुनावका बिषयमा केन्द्रित रहने बताइएको बैठक चुनाव पछि पहिलो पटक बसेका कारण
काठमाडौं, ६ माघ । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नी पत्नी डा. आरजु राणालाई राष्ट्रिय सभामा लैजानेगरि गृहकार्य गरेपनि अन्तिममा आएर उनको यो योजना तुहिएको छ । हालै
यस्ता छन् प्रदेश मन्त्रिपरिषद तथा मुख्यमन्त्रीको २५ जिम्मेवारी
काठमाडौं, ६ माघ । सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति छिट्टै हुने भएकाले सरकारले मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको कामलाई अघि बढाउन कार्यालयको स्वरूप र जिम्मेवारी निर्धारणसहितको अन्तरिम व्यवस्थापन
काठमाडौं ६ माघ । एमाले-माओवादीबीच चार महिनायताको एकता प्रक्रिया अब निर्णायक मोडमा पुगेको नेताहरूले दाबी गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार बालकोटमा भेट्दै
अहिले देखिएको अवस्थाबाट आयोग चिन्तित, अविलम्ब शान्ति कायम गर्न आग्रह
काठमाडौँ, ५ माघ : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले राष्ट्रियसभा सदस्यको आगामी निर्वाचनलाई सहज, सरल र शान्तिपूर्ण रुपमा अघि बढाउन निर्वाचन आयोगले सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको बताउनुभएको छ ।
एमालेमा प्रचण्डको गुट बन्दै, अध्यक्ष दिएर मात्रै पार्टी एकता गर्नुपर्ने एमाले नेताहरुकै आवाज
५ माघ, काठमाण्डौ । पार्टी एकताको अभियानमा लागेका नेकपा एमाले र माओवादीको नेतृत्वबिच पदीय बाँडफाँटको विषय नै पेचिलो बन्दै गएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सहजै प्रधानमन्त्री स्विकार